Information akaunganidzwa kusika munhu richikurukura nevanhu vanoitisana, Pachipuro mu nepachinko parlors
トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Information akaunganidzwa kusika munhu richikurukura nevanhu vanoitisana, Pachipuro mu nepachinko parlors
Ndinofunga kuti pane vatengi vanoona nguva dzose here kuenda nepachinko yokumusoro. Vatengi vanenge kuenda vachidzoka zuva Shigeku rutsoka pane mushandi kwakadaro, anonzi vanoitisana mu nepachinko indasitiri. Uye, kunyange zvazvo ndinofunga sezvisingaiti anozivikanwa ne nyore kucherechedzwa, vamwe vanhu vanonzi Pachipuro achidya ari nepachinko.
nepachinko yokumusoro, Customers vaionekwa kumboda Pachipuro, kazhinji sei kurambidzwa, asi zvakaoma kuudza. In Pachipuro akadaro kana kuti kana zvakanaka kuita pachake Maererano regulars, asi munhu anofanira Kunyatsoziva zvokuti anogona kutaura, ndinofunga kuti ndiyo nzira kunobatsira.
regulars zvinosanganisira, asi vasiri kuvimba zviitiko uye kupora nguva, zvichaita kuenda chete nepachinko yokumusoro zuva nezuva. Nepachinko ndiro kufarira Ichokwadi, asi regulars ndivo vainyanya avo vanoda tenga pacharo.
mubvunzo kuti munhu anofanira kunzwisisa, asi zvichaitika mune imwe nyaya, nokuti ndiyo shanduro kuenda chete nepachinko yokumusoro ose zuva, tinoziva yakanaka anomira kufamba vo zvakanaka. Somuenzaniso, kuti Chikuva, Toka aisvuta kazhinji zuro, isu takaita zvikuru mubhizimisi, Nokurangarira seni akabuda zvakare Pashure wekushanduka zvikuru kubva nguva zhinji, iwe kana kunzwa siyana mune chat.
By pfungwa kuti kubatana hwepedyo regulars, kubva data, iwe uchava mashoko akadai haana kuverengwa nyore, zvinokwanisika kuti zviri nyore. Kazhinji, kana pane basa, ndinofunga kuti pane kunyange kana zvakaoma kuenda nepachinko yokumusoro ose zuva.
mashoko kubva regulars, asi iwe vanogonawo neapo zvinhu zvakafanana zvakanaka zvakadaro, saka iwe kana ini kurondedzera vaya Nyatsotarisa kuti mamwe mashoko, tapota ona taura. Pane zvikuru zvakanakira kuva kuti pamwe regulars.
ndiye pachavo kubatana zviri
ipapo Pachipuro, asi ndinofunga ichi chiri chokwadi zvikuru chaizvoizvo zvakaoma. Zvisinei, kana ndakakwanisa kuzvisarudzira kubatana chero mukana Pachipuro, ndinofunga kuti hapana mubvunzo kuti chivimbo mashoko chinogona kupfuura regulars.
_x 000D_ Pachipuro ndiko, nokuti kuita vapenyu panguva nepachinko, kwave kwemisha kudzidza. Imwe neimwe Specs uye kuita kana, muganhu mutsetse, zvakadai sepaya kumisa kana apo kurwisa, zvinonzi akafunga kuti zvakasiyana-siyana mashoko rimwe womuenzaniso.
Zvisinei, panyaya Pachipuro, kusiyana dzose, imi famba madenderedzwa inonaka nepachinko yokumusoro kunotsvaka Unobata. Hazvirevi ipapo mazuva ose kuti chete nepachinko parlors, avo musingaendi chete chete nepachinko chitoro asi Zvechokwadi, uyewo vaya vanoenda siyana nepachinko parlors, uyewo kuva vasangana zvakare totsunga kuti
Pachipuro, ndinofunga kuti zvakaoma . Akanakisisa yatovapo, handizivi Pachipuro, ndiko kuti vave shamwari nevanhu vari nguva dzose zvakanaka kunze. Kana Ndakaedza kutaura, kana iwe kana Kuwashika 'iri muchina mashoko, pane mukana kuti vasvike kupa musoro ruzivo.